शतकपछि रोस टेलर किन निकाल्छन् जिब्रो बाहिर ? यस्तो छ रोचक कारण - News20 Media
February 7, 2020 February 7, 2020 N20LeaveaComment on शतकपछि रोस टेलर किन निकाल्छन् जिब्रो बाहिर ? यस्तो छ रोचक कारण
काठमाडौंः भारतसँगको टी–२० सिरिज ५–० ले हारेपछि एकविदसीय सिरिजमा भने न्यूजिल्याण्डले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ । उसले बुधबार भारतले ३ सय ४८ रनको विशाल लक्ष्य दिँदा पनि पूरा गर्न सफल भयो । यो जितमा अनुभवी ब्याट्सम्यान रस टेलर मुख्य नायक रहे । उनकै शानदार शतकमा भारतमाथि न्यूजिल्याण्डले एतिहासिक जित निकाल्न सफल भएको थियो ।
एकविदसीय क्रिकेटमा यति ठूलो विशाल लक्ष्य पूरा गरेको न्यूजिल्याण्डले पहिलो पटक हो । सिरिजको पहिलो खेलमा टेलरले ८४ बलमा ४ छक्का र १० चौका प्रहार गर्दै अविजित १०९ रन बनाए । आफ्नो शानदार शतक पूरा गरेसँगै एकपटक फेरि टेलरले ‘खुसी’ व्यक्त गरेका छन् । उनी शतक बनाएपछि जिब्रो निकालेर ‘खुसी’ मनाउँछन् । आखिर किन टेलर शतकपछि दर्शकमाझ जिब्रो निकालेर ‘खुसी’ व्यक्त गर्छन् होला?
शतकपछि जिब्रो निकालेर खुसी व्यक्त गर्ने टेलरको अब ‘स्टाइल’ नै भइसकेको छ । सन् २००७ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध उनले आफ्नो दोस्रो एकविदसीय शतक बनाएका थिए । त्यसक्रममा धेरै पटक फिल्डरले टेलरकाे ‘क्याच’ छुटाएका थिए । जब–जब ‘क्याच’ छुट्थ्यो तब उनको जिब्रो बाहिर आउँथ्यो । यस्तो देख्दा उनकी छोरी साह्रै खुसी हुन्थिन् । त्यसपछि छोरीको खुसीको लागि टेलरले हरेक शतकपछि जिब्रो निकालेर खुसी साँट्न थाले । अहिले पनि शतक बनाएपछि उनी जिब्रो निकालेर खुसी व्यक्त गर्छन् ।
एकविदसीय क्रिकेटमा टेलरले २२९ म्याचको २१३ इनिङ्समा ८ हजार ४ सय ८५ रन बनाएका छन् । जसमा उनको २१ शतक र ५० अर्धशतक सामेल छ । यस्तै टेष्ट क्रिकेटमा टेलरले १९ शतक र ३३ अर्धशतक बनाएका छन् । टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भने उनले हालसम्म शतक बनाउन सकेका छैनन् ।